किरावि संघको विवाद चुलिदैं, ९ जिल्लाको समर्थन रामचन्द्र राईको समितिलाई ! - Nayabulanda.com
किरावि संघको विवाद चुलिदैं, ९ जिल्लाको समर्थन रामचन्द्र राईको समितिलाई !
नयाँ बुलन्द २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १८:३० 410 पटक हेरिएको
इलाम : भर्खरै दुई धारमा विभाजित भएको किरात राई विद्यार्थी (किरावि) संघको विवाद झन् चुलिदों छ । केन्द्रीय समिति नै दुई वटा बनाएर विभाजित किरात राई विद्यार्थी संघको असर जिल्ला तहसम्म देखिन थालेको छ ।
गत २८ वैसाखमा खोटाङको दिक्तेलमा सम्पन्न किरावि संघको नवौं राष्ट्रिय सम्मेलनले जितेन राईको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो । त्यही राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रबाट असन्तुष्ट विद्यार्थीहरुको १८ भदौमा झापाको दमकमा भएको भेलाले रामचन्द्र राईको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय अर्को केन्द्रीय समिति घोषणा गर्यो ।
खोटाङमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष मण्डलले सबै पक्षलाई नसमेटी एकलौटी रुपमा समिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले समानान्तर समिति बनाएको हो ।
यसरी केन्द्रीय समिति दुई वटा बनेपछि कुन समितिलाई समर्थन गर्ने भन्ने जिल्ला समितिमा द्विविधा हुन स्वभाविक हो । तर कुनै न कुनै एक टिमलाई समर्थन गर्न जिल्ला समिति बाध्य बनेको छ । केन्द्रीय अध्यक्षसँग निकटताका आधारमा जिल्ला समिति समेत ध्रुविकृत बनेका छन् ।
यसै क्रममा ९ जिल्ला समितिले पछिल्लो पटक बनेको रामचन्द्र राईको नेतृत्वको समितिलाई समर्थन गरेको छ । शुक्रबार ९ जिल्लाका अध्यक्षहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै रामचन्द्र राई नेतृत्वको समितिलाई समर्थन गरेको जनाएका छन् ।
रामचन्द्र राई नेतृत्वको समितिलाई समर्थन गर्ने जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा, उदयपुर, मोरङ, ओखलढुङ्गा, संखुवासभा र तेह्रथुम रहेका छन् । उनीहरुले रामचन्द्र राईको नेतृत्वमा नै रहेर आफ्नो गतिविधि अघि बढाउने जनाएका छन् ।
‘९ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा खोटाङमा गठित एक पक्षीय, अलोकतान्त्रिक र अराजक संगठनले सम्पूर्ण किरात राई विद्यार्थीहरुको भावनालाई समेट्न नसक्ने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं’ संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ खोटाङ सम्मेलनबाट निर्वाचित भनिएका जितेन राईको नेतृत्वको कार्य समिति हामीलाई अस्वीकार्य छ भन्दै हामी तपशिलका जिल्ला समितिहरुले रामचन्द्र राईको नेतृत्वमा नै रहेर आफ्नो गतिविधि अघि बढाउने व्यहोरा समेत आम किरात राई दाजुभाई, दिदीबहिनी तथा न्यायप्रेमी विद्यार्थी साथीहरुलाई यसै संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
बाँकी जिल्ला समिति जितेन राई नेतृत्वको समर्थनमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उनीहरुको विज्ञप्ती भने सार्वजनिक भएको छैन । हालसम्म तटस्थ भूमिका रहेको देखिएको छ ।
बहुमत जिल्ला समिति आफूहरुको समर्थनमा रहेको रामचन्द्र राई नेतृत्वको समितिको दावी छ । उनीहरुको दावी सत्य भएमा जितेन राई नेतृत्वको समितिलाई नैतिक संकट देखिन्छ ।
यसरी सतहमा आउने गरी विभाजित हुनुले समग्र विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्यामा परेको भन्दै राई विद्यार्थीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ती :